အောင်မြင်မှု နောက်ကို မလိုက်ပဲ တန်ဖိုးနောက်ကို လိုက်ပါ။တန်ဖိုးရှိရင်.… အောင်မြင်မှုက နောက်က လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ | မာသင်
အောင်မြင်မှု ဆိုတာ နောက်က လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်ကို တန်ဖိုးမရှိပဲ အောင်မြင်နေတဲ့လူသား တစ်ဦး ကိုပြပါ။
ကျွန်တော့်ကို တန်ဖိုးမရှိပဲ အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပြပါ။
ကျွန်တော့်ကို တန်ဖိုးမရှိပဲ အောင်မြင်နေတဲ့စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ပြပါ။
ကျွန်တော့်ကို တန်ဖိုးမရှိပဲ အောင်မြင်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပြပါ။
ကျွန်တော် ..တန်ဖိုးရှိလို့အောင်မြင်နေတဲ့လူသား တစ်ရာကို ပြပါမယ်။
ကျွန်တော် ….. တန်ဖိုးရှိလို့အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်း တစ်ရာကို ပြပါမယ်။
သေချာကတော့ … .
အောင်မြင်လို့… တန်ဖိုးတက်လာတာတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် …
တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ ရေ ကို တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရေ ကိုဝယ်သောက်နေရတယ်။
တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့လေ ကိုလဲ တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ခဲ့ရင် တစ်ချိန်မှာ ဝယ်ရှူရဦးမှာပါပဲ။
ကိုယ့်ဝန်ဆောင်မှု ကို ဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုး ကို မဖော်ထုတ်နိုင်ရမှာလဲ။
ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို ဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးကို မဖော်ထုတ်နိုင်ရမှာလဲ။
ကိုယ့် အရည်အချင်းကို ဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးကို မဖော်ထုတ်နိုင်ရမှာလဲ။
တန်ဖိုးဆိုတာ Price ဈေးနှုန်းကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
Value တန်ဖိုးကို ပြောတာ။
Price ဈေးနှုန်း က ကိုယ်က သတ်မှတ်တာ။
value တန်ဖိုးက customer က သတ်မှတ်တာ။ ဒါကြောင့် customer တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကို value လို့ခေါ်တာ။
customer တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာက information လား။ သင့်လုပ်ငန်းက ပေးနိုင်ရင် value တန်ဖိုးတက်လာလိမ့်မယ်။
customer တန်ဖိုးထားတဲ့အရာက speed မြန်ဆန်မှုလား။ သင့်လုပ်ငန်းက ပေးနိုင်ရင် value တန်ဖိုးတက်လာလိမ့်မယ်။
customer တန်ဖိုးထားတဲ့အရာက quality အရည်အသွေးလား။ သင့်လုပ်ငန်းက ပေးနိုင်ရင် value တန်ဖိုးတက်လာလိမ့်မယ်။
customer တန်ဖိုးထားတဲ့အရာက Choice ရွေးချယ်စရာများတာလား။ သင့်လုပ်ငန်းက ပေးနိုင်ရင် value တန်ဖိုးတက်လာလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် .…. တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ် ဆိုရာမှာ အရင်ဦးဆုံး တန်ဖိုးသိအောင်လုပ်သင့်တယ်။
တန်ဖိုးသိမှ .…. တန်ဖိုးရှိမှာ။
တန်ဖိုးရှိမှ .…..အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း…..၊။
လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက် အချက် (၃) ချက်
၁။ တန်ဖိုးနောက်ကို လိုက်
၂။ တန်ဖိုး ရှိအောင်လုပ်
၃။ တန်ဖိုး သိအောင်လုပ်
မာသင် ၏ စီးပွားရေးဒဿနများ (ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးတွေးခေါ်မှု)